သကျတနျ့ခြို: December 2010
သူကြီးတစ်ယောက် မန္တလေးကိုရောက်နေခဲ့ပါပြီ ။ ခရီးသွားတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေရေးနေကြဆိုတော့ ဒီတခါ လည်း ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး ရွှေစင်စင်္ကြာ အဝေးပြေးကားပေါ်မှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို ရေးပြပါဦး မယ် ။ ကားက ၇ နာရီမှ ထွက်တာဆိုတော့ ၆ ခွဲအရောက် ကားဂိတ်ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။ လိုက်ပို့တဲ့ လူတွေနဲ့ဆိုတော့ အများကြီးပေါ့ ။ ဒါနဲ့ ခြောက်နာရီခွဲကျော်ကျော် ကားပေါ်လည်းတက်ရော ခုံနံပါတ်က ၂၈ ခင်ဗျ ။ အဲဒီအချိန်တော့ထင်လိုက်သား ဟင် ငါ့ဂဏန်းက ဘူဂဏန်းလို့ ။ (ထားလိုက်ပါလေ ဖဲသမား ဥာဉ်လေးတွေ ပါပါ လာတယ် ဆေးကျောင်းသားဘ၀က အကျင့်တွေဖျောက်ဦးမှ ) ။ ဘေးမှာ ကျတဲ့လူကို ကြည့်လိုက်တော့ လား လား...ကျနော်ကြိုက်တဲ့ ရော့ခ်ကာကြီး အာဇာနည်ခင်ဗျ ။ ဆံပင်ကို အရှည်ကြီးနဲ့ တကယ့်ကိုရော့ခ်ကာစတိုင်ပဲ ။ ဒါပေ မယ့်ကျနော့်အံ့သြမှုကတာရှည်မခံဘူးခင်ဗျ ။ သေချာကြည့်လိုက်တော့မှ အာဇာနည်စတိုင်နဲ့ လူတစ် ယောက်ဖြစ်နေပါကလား ။ စတိုင်ကတော့ ဒင်းကြမ်းကိုတူတာခင်ဗျ ။ ဒါနဲ့ကျနော်လည်းစိတ်ထဲ ကြိတ်ပြီး နာ မည်ပေး လိုက်တယ် ။ အာခေါင်နီလို့ ။
၇ နာရီအတိကျတော့ ကားကစထွက်ပါပြီခင်ဗျ ။ အဲဒီအချိန်မှာ အာခေါင်နီက ဂျင်းဘောင်းဘီအိတ်ထဲက ဖုန်းကိုထုတ်ပြီးစဆက်ပါလေရော ။
" ဟလို...မလား...ဟလို...မ ...မ ကြားလား ဟလို..အော် မရယ် ...မောင်ဖြင့်လွမ်းလိုက်တာ "
(ထိုအချိန်တွင်တစ်ဖက်က ဘာပြောနေမှန်းမသိပါ )
" ဘာ..မ... မကွာ မ မောင့်ကို မယုံဘူးလား ယောင်္ကျားလေးပါကွာ ဘေးမှာ မ ရာ ခက်လိုက်တာ ခဏ "
" ဟို အကို ကျနော့်ဖုန်းလေးတစ်ချက်ပြောပေးပါဗျာ "
" ခင်ဗျာ "
" ဟို ဘေးနာက ယောင်္ကျားလေးဆိုတာ မယုံလို့တဲ့ "
" အော်..ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့ "
" ဟလို "
" အော်..အကို ကျေးဇူးပါနော် ကျွန်မက ဘေးနားက မိန်းကလေးဖြစ်မှာစိုးလို့ "
( တိန်...စိတ်ထဲက မြည်တဲ့အသံပါ )
" ဟုတ် ကျားစစ်စစ်ကြီးပါခင်ဗျ "
ကျွန်တော်လည်းပြောပြီးပြီးချင်းဖုန်းပြန်ပေးလိုက်တယ် ။ မဟုတ်ရင် အာခေါင်နီရဲ့ မနဲ့ ကျားမ အရှုပ်တော်ပုံက တော် တော်နဲ့ပြီးမယ်မထင်ဘူး ။ ဒါနဲ့ ဆယ်မိနစ်လောက် ကားပေါ်မှာစကားပြောပြီးတော့ သူဖုန်းပိတ်လိုက်တယ် ။ မကြာဘူး ခင်ဗျ ထောက်ကြဲံ့လောက်လည်းရောက်ရော
" ဟလို မ ...မ ဘာလုပ်နေလဲ ဟလို.... မောင့်အသံကြားရလား မ..နော်လူကြားထဲမထွက်နဲ့ မ..အ ခု ဘယ်မှာ လဲ...မ ..မ "
ဘုရား..ဘုရားငါတော့ ဒီတစ်ညတော့ သေပြီထင်တယ် ။ ဒီ မနဲ့ အာခေါင်နီရဲ့ကြားမှာ သေပြီထင်တယ် ။ နောက်မှ တွေးမိတယ် ။ေ အာ် အဝေးပြေးလမ်း သစ်ကြီးရောက်ရင်တော့ ဖုန်းမမိလောက်တော့ပါဘူး ။ ဒါဆို အိပ်လို့ရ လောက်ပြီထင်ရဲ့ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အထင်မှားသွားတယ်ဗျာ ။ ဘယ်ကလာ သူ့ဖုန်းကလည်း ဂြိုလ်တု ဖုန်းလားမသိပါဘူး ။ GSM ရော CDMA ရော မမိတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမအလယ်ကြီးမှာ တ မ မနဲ့ နာရီ ၀က်တစ်ကြိမ်လောက်ဆက်နေပြန်ရော ။
ထားပါတော့ ။ ဒါနဲ့ Pioneer ( ၁၁၅ မိုင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း) ရောက်ပါလေရော ။ အာခေါင်နီခမျာ ။ သူများ တွေထမင်းစားနေတဲ့အချိန်သူ့မှာ တမ မ နဲ့ ဖုန်းဆက်နေရတုန်းဗျာ ။ ကျွန်တော်အတော်သနားသွားတယ် ။ ဧကာန သူ့ကို သူ့ရဲ့ မက နာရီဝက်တစ်ကြိမ် Report တင်ရမယ်များမှာထားသလားမသိပါဘူး ။ ဒါနဲ့ နာရီ ၀က်ပြည့်တော့ ပြန်ထွက်ပါလေရော ။ ပြီးတော့ နေပြည်တော် ရောက်ခါနီးမှေးကနဲ တစ်ချက်ငိုက်သွားမိတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ
" မ...မ ဟလို...မ ကျွန်တော်နေပြည်တော်ရောက်နေပြီဗျ ...ဘာ...ကားဆရာနဲ့အဆင်မပြေဘူးဟုတ်လား မ... မတို့ ဇက်ကူးနေပြီလား အိုကေအိုကေ ဒါဆို မောင် မနက်တက်လာခဲ့မယ် နော် မောင်မောင်းမယ် မ..မ .."
အဲဒီအသံကြောင့်ပဲ ကျွန်တော့်မှာ ပြန်နိုးလာရလာပါရော ။ အင်းဒီအတိုင်းဆို ငါတော့ တရေးမှ အိပ်ရမယ်မ ထင်ပါလား ။ ဒါနဲ့ နေပြည်တော်ကနေပြန်ထွက်တော့လည်း ကားက လုံးဝအမှောင်ချထားပြီး ။ တကွီ ကွီ နဲ့သူ့မှာ မက်ဆေ့တွေ ပို့နေတုန်း ။ တကားလုံးလည်းအိပ်ကုန်ကြပြီဆိုတော့ ဖုန်းဆက် တဲ့အကြိမ် အရေအ တွက်တော့လျော့သွားတယ် ။ တဖြည်းဖြည်းလေးအေးလာတော့ ကျနော်လည်း ပြန်ငိုက် လာပြန်တယ် ။ အံမယ် သတိရလာလို့ကြည့်လိုက်တော့ အာခေါင်နီကကျွန်တော့်ပခုံးကို မှီလို့ဗျာ ။ အပီကိုယူနေလိုက်တာများ ။ ကျွန်တော့်မှာ ကြာတော့လက်အံပါသေလာတယ် တောင့်တောင့်ကြီးနေရတော့ ။ ကျွန်တော် လှုပ်လိုက် လို့နိုးသွားရင်လည်းအားနာစရာကြီးဆိုတော့ ။ အင်း ဒါနဲ့ ဖုန်းကဗျာ ကံကောင်းချင်တော့ ၀င်လာပါရော ။ သူလည်းလန့်ဖြန့်ပြီး
" ဟလို...မ..မ မောင်ကွာ ဖုန်းပြတ်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်သေးတယ် ..မ..မ. ဘယ်သူနဲ့စကားပြောနေသေးလဲ ..မ မှန်မှန် ပြောနော် မ..."
ကျွန်တော်လည်း အတော်ကြီးညစ်သွားမိတယ် ။ ထားလိုက်ပါလေ ။ ဟော်တယ်ကျတော့မှ နှပ်တော့မယ်ပေါ့ ။ ဒါနဲ့ ဆက်ပြောဦးမယ် ။
မနက် သုံးနာရီခွဲလောက်ကျတော့ မန္တလေးရောက်ခါနီးမှာ ထပ်ပြီး နားပါသေးတယ် ။ အဲဒီတချိန်လုံး လည်းဖုန်း ပြောကောင်းတုန်း ။ ပြီးတော့ ခရီးဆက်လာပြန်ရောဆိုပါတော့ ။ ထုံးစံအတိုင်းအာခေါင်နီက ကျွန်တော့်ပခုံး ပေါ်ခေါင်းကြီးတင်လို့ ။ ကျွဲဆည်ကန်ကားဝင်းထဲလည်းဝင်ရော အဲဒီတော့မှ အာခေါင်နီက သက်ပြင်းချလိုက်ပြီး
" ဟလို အဖေ ကျွန်တော်မန်းတလေးရောက်နေပြီ ဆိုင်ကယ်လွှတ်လိုက်ပါ ဒါပဲနော် "
တဲ့ တစ်ခွန်းမှ ဘုရာစူး အိမ်ကိုတစ်ခွန်းပဲဆက်တယ် ။ ဟီး အားကိုးလိုက်ရပုံများ ။ သူလည်းငိုက်စိုက်ငိုက်စိုက် ကိုယ်လည်းငိုက်စိုက်ငိုက်စိုက် (ဦးခေါင်းတွေပြောပါတယ်) နဲ့ ဆင်းလာပါတယ် ။ ဆိုင်ကယ်တွေအလုအယက်နဲ့ ဟိုဆွဲဒီ ဆွဲနဲ့ ကျွန်တော်လည်းအဆွဲမခံဘူး နည်းနည်းနပ်သွားပြီး သူတို့မဆွဲခင်ကတည်းက ပါလာတဲ့အိတ်ကြီးကို ကား အောက်ကို ခပ်တည်တည်ပစ်ချလိုက်တယ် ဟီး ။ မြေကြီးပေါ်တောင်မရောက်ဘူး ၀ိုင်းလုကြတာ ။ အိတ်ရသွား တဲ့ဆိုင်ကယ်သမားနောက်ကို လိုက်သွားလိုက်တယ် ။ ဆိုင်ကယ်သမားအကြောင်းပြောရဦးမယ် ။ ဘုရားစူး မန္တလေး သားဗျာ ဒါပေမယ့် Golden City Hotel ကို မသိဘူးတဲ့ ။ သူကျွန်တော့်ကိုခေါ်သွားတာ ကျုံးရှေ့ကို ။ ဒါနဲ့ ဟေ့လူ အဲဒီကျုံးရှေ့မှာ Sedona နဲ့ Swam နှစ်ခုပဲရှိတယ် ။ Golden City က အဲဒီမှာမဟုတ်ဘူး ။ ကိုယ်လည်း နေရာတအတိအကျမသိဘူးဗျ ။ ဒါနဲ့ ဟိုလူ့မေးဒီလူ့မေးနဲ့ဆိုင်ကယ်ပတ်စီးလိုက်ရတာတင် တစ် နာရီ လောက်ကြာသွားတယ် ။
ဒါနဲ့ ဟေ့လူ ဗထူးကွင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထင်တယ်ဗျ ဟိုဗျာ ငုဝါလား ဘာလား ကားလက် မှတ်ရောင်း တယ်လေ အဲဒီနားမှာ လို့ပြောလိုက်တော့မှ ဟုတ်လိုက်လေ ဆရာသမားရယ် ကျွန်တော်မေ့နေတာ ဆောရီး နော်တဲ့။ သေရာ ကိုယ့်မှာနှပ်ချိန်တောင်မရှိလိုက်ဘူး ။ အခု ဟိုတယ်မှာ ခဏနားရင်း ဒီပို့စ်လေး တင်လိုက် တာပါ ။ နောက် အတွေ့အကြုံတွေလည်း ဆက်လက်ရေးသားသွားပါ့မယ် ။
(အာခေါင်နီရေ ဒီဘလော့လေးများဖတ်မိရင် ခုံနံပတ် ၂၈ မှာ တောင့်တောင့်ကြီးနဲ့ ခပ်ပေပေ ခေါင်းစွပ်ကြီး စွပ်ထား ပြီး တစ်ညလုံးငုတ်တုတ်မေ့ခဲ့ရတဲ့လူဟာ ကျွန်တော်သက်တန့်ချိုပါ ။ တွေ့ရာမြင်ရာဘလော့ရေးတတ်တဲ့ အကျင့် ရှိတဲ့အတွက် နားလည်ခွှင့်လွှတ်ပေးပါခင်ဗျား)
(ခေတ္တ မန္တလေး )
Posted by သက်တန့်ချို at 10:43 PM 8 comments:
ထိုင်းဘာသာစကားနဲ့ဆိုရင်တော့ ဒီအံ့သြဖွယ်ရာ အပင်ကို Nareepol လို့ခေါ်ပါတယ် ။ Naree ဆိုတာက မိန်းက လေးကိုရည်ညွှန်းပြီး pol ဆိုတာကတော့ သစ်ပင် ၊ အပင်တွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ် ။ မလေးလိုဆိုရင်တော့ Buah လို့ခေါ်တွင်ပါတယ် ။ ဒါဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပေးခဲ့တဲ့အရာတွေအနက် မှာအထူးဆန်းဆုံး အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဘန်ကောက်မှ ကီလိုမီတာ ၅၀၀ လောက်ကွာဝေးတဲ့ Petchaboon စီရင်စုမှာ တကယ့် သူယောင်မယ်သီးတွေသီးတဲ့ သစ်ပင်တွေကို သင်သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ် ။
Posted @ www.thettantvillage.com
Posted by သက်တန့်ချို at 10:16 PM7comments:
ဒီဇင်ဘာ မွေးလချင်းတူတဲ့သူငယ်ချင်းနှင်းဟေမာအတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ကဗျာလေးဖြစ်ပါတယ် ။
တလက်စတည်း ပရောက်စီအခက်အခဲရယ် ဖရီးဒမ်းကနှေးနေတာရယ် နောက်ပြီး Ultrasurf သုံးနေရတာရယ်ကြောင့် ဘလော့ကို စိတ်ရှိသလောက် မသုံးနိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ ဒါကြောင့်သူငယ်ချင်းတွေအိမ်တွေကို အချိန်မှန် လည်နိုင်ဖို့ဝေးစွ ကိုယ့်စီဘောက်ကိုလာလည်သွားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုတောင် ပြန်မလည်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ကွန်နက်ရှင်လေးကောင်းတဲ့အချိန် Update post လေးတွေအမြန်တင် ၊ စီဘောက်လေးဝင်ရေး ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ အားလုံးကို အထူးပဲတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ ......။
ဘ၀ ရဲ့ ဖွင့်ဆိုမှုအတွေးအခေါ်တွေ
ဘာတွေ " ပိုင် " ခဲ့ကြပြီးပြီလဲ.....
"နှင်း" ဆိုတဲ့ အမည်နာမနဲ့
မင်းရဲ့ အိမ်ကလေးထဲ လင်းလက်စေခဲ့ပြီ.....
သူငယ်ချင်းရေ မွေးနေ့လေးမှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် မိဘကိုလုပ်ကျွေးနိုင်တဲ့သမီးအလိမ္မာလေးဖြစ်ပါစေ ။
Posted by သက်တန့်ချို at 9:49 AM 1 comment:
ကြယ်တွေကို ရေတွက်ခဲ့ဖူးကြတယ် ....
အတူတူ ဆိုညည်းခဲ့ကြဖူးတယ် ......
ငါတို့ မနက်တွေ လင်း ခဲ့ကြဖူးတယ်
ငါတို့ဟာ...ချစ်သူတွေမဖြစ်လိုက်ရတဲ့ ချစ်သူတွေပဲကွယ် ။
( ချစ်သူလည်းမဟုတ် သူငယ်ချင်းလည်းမဟုတ် တစ်ချိန်တုန်းက ဆံနွယ်တွေအပေါ် နေရာင်ခြည်ကျတိုင်းရွှေအိုရောင်မီးတောက်မီးလျှံတွေ နဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ကဗျာပေါင်းမြောက်များစွာ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့ " သူမ " အတွက် )
Posted by သက်တန့်ချို at 4:29 PM 14 comments:
Las Vegas မှ ရေအောက်လူသားဆန်တာကလော့
ရေ 117 000 ဂါလံဖြည့်ထားတဲ့ ရေအောက်ကန်ပြီးဟာ Las Vegas မှ Silverton ဟိုတယ်မှာ တည်ရှိပါတယ် ။ Bryson Drescher နဲ့သူ့မိခင် Jenny Drescher နဲ့အတူ ရေအောက်မှာရေကူးနေတဲ့ ဆန်တာကလော့ကို လာ ရောက်ကြည့်ရှူနေပုံဖြစ်ပါတယ် ။ ရေအောက်မှဆန်တာကလော့ဟာ နားမှာ Microphone တပ်ဆင်ထား တဲ့အ တွက်ပြင်ပမှ ကလေးငယ်များနဲ့လည်း ဆက်သွယ်စကားပြောလို့ရပါတယ် ။ ဧည့်သည်တွေကို ခရစ်စမတ်ရာ သီအ တွက် စွဲဆောင်ခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 4:24 PM No comments:
ခရစ်စမတ်ပွဲတော်မှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့နဲ့ လာမည့် ယုန်နှစ်ကိုကြိုဆိုဖို့အတွက် ချစ်စဖွယ်အိမ်မွေး ယုန်ကလေးကို ဆန်တာ ကလော့ဝတ်စုံဆင်မြန်းပေးထားပုံပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီယုန်ကလေးကို တိုကျိုတောင်ဖက် Yokohama ရှိဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ကတွေ့ရပုံဖြစ်ပါတယ် ။ တရုတ်ရိုးရာ ပြက္ခဒိန်အရ လာမယ့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဟာ ယုန်နှစ်ကျရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 4:12 PM No comments:
တရုတ်ပြည်အရှေ့ပိုင်း Shandong စီရင်စု Linyi မှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက မြက်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ခရစ်စ မတ်သစ်ပင်တွေကို ကြည်ရှုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ အစိမ်းရောင်ခရစ်စမတ်သရုပ်ဖော်မှုအဖြစ် မြက်တွေ ၊ ကြိမ်တွေ ၊ သံဝါယာတွေနဲ့ နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ ခရစ်စမတ်ပစ္စည်းတွေဟာ ဥရောပနဲ့ အမေရိက နိုင်ငံများ မှာအတော်လေး တွင် ကျယ် လို့လာပါတယ် ။ လက်မှုပညာ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတီထွင်ဖန်တီးမှုနဲ့ အတွေးအခေါ်ပေါင်း များစွာ ပေါင်း စပ်ပြု လုပ်ထားပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 4:08 PM No comments:
ရှပ်ထွေးပွေလီစွာ သွားလာနေကြတဲ့ ကားရောင်စုံတွေအတွက် လမ်းပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ လမ်းလွှဲစနစ်များအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ကြရအောင် ။ ၀ိုး...ခေတ်မှီ ဗိသုကာလက်ရာတွေနဲ့ ယဉ်ကြောစနစ်တွေက အံမခန်းဖွယ်ရာပါပဲ ။ စက်ဝိုင်းသဏ္ဍာန်တံတားကြီးတွေနဲ့ အကွေ့အကောက်လမ်းမတွေ အရာအားလုံးဟာ သေသပ်လှပစွာနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖော်ဆောင်ပြသလို့နေပါတယ် ။ မိုးထိမြင့်တဲ့အဆောက်အဦးတွေကြားမှာ အကွေ့အကောက်များတဲ့ တံတားတွေက ကောင်းကင်ယံကနေဖြာဆင်းနေသလိုပါပဲ ။
Posted by သက်တန့်ချို at 4:03 PM No comments:
အချို့လူတွေအဖို့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အဖြစ်မွေးမြူဖို့ ချော့မြူဖို့ ဒါမဟုတ် အလှကြည့်ဖို့ ဆိုတာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ ။ သင်ပုံထဲမှာ မြင်ရတာကတော့အလွန်ထူးဆန်းပြီး ကြောက်မယ်ဖွယ်ရာ Alien လို့ခေါ်တဲ့ ဂြိုလ်သတ္တ၀ါ တစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအကောင်ဟာဘာနဲ့ဆင်တူသလဲဆိုတော့ ယန္တရားစက်တစ်ခုလိုလို ဒါမှမ ဟုတ် ပင်လယ်ထဲက ရေသတ္တ၀ါစုတ်လေး တကောင်ကောင်နဲ့ဆင်တူနေပါတယ် ။ ဒီလို ဂြိုလ်သတ္တ၀ါတွေ ကမ္ဘာ မြေရဲ့ နေရာအနှံ့အပြားမှာ မကြာခဏတွေ့တွေ့နေရခြင်းဟာ ကမ္ဘာကြီးပေါ်ကို ဂြိုလ်သား တွေပုန်းရှိုး ကွယ်ရှိုး လာရောက်နေကြပြီလားဆိုတဲ့ သံသယကို ပိုပြီးကြီးထွားစေခဲ့ပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 3:33 PM 1 comment:
Posted by သက်တန့်ချို at 9:46 AM3comments:
၁ ။ သူငယ်ချင်း သူငယ်ချင်းဆိုပြီး နောက်ကျောဓါးနဲ့ထိုးတတ်တဲ့ ရေပေါ်ဆီတွေကိုလည်းမုန်းတယ် ။
၂ ။ ရွှေတစ်ဆယ်သားဘယ်လောက်စိန်လော်ကတ်သီးကြီးဘယ်လောက်ဆိုပြီး ကန်စွန်းရွက်တွေ အများကြီး ၀ယ် ၀ယ်သွားတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက ဒေါ်ငွေရှင်ကိုလည်းမုန်းတယ် ။
၃ ။ တခါတခါ မျက်နှာသာပေးမလိုနဲ့ တခါတခါ ချောက်ထဲတွန်းချတတ်တဲ့ ကံကြမ္မာကိုလည်း မုန်းတယ် ။
၄ ။ ပေါ်မလိုလို ပေါ်မလိုလိုနဲ့ Page Loading Error ပြတတ်တဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကိုလည်းမုန်းတယ် ။
၅ ။ အချစ်ဆိုပြီးတော့ လူတွေညည်းညည်းနေကြတဲ့ အကောင်အထည်မပြနိုင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုကိုလည်းမုန်းတယ် ။
၆ ။ သိက္ခာဆည်တရားတွေ ပြပြနေပြီး ညနေအချိန်မှန် ခွက်ပုန်းချတတ်တဲ့ ဂေါပကလူကြီးကိုလည်းမုန်းတယ် ။
၇ ။ ကိုယ့်ရာသီနဲ့ကိုယ် မစစ်မှန်နိုင်တော့တဲ့ ဒီဇင်ဘာရဲ့ လျော့ပါးလာတဲ့ ချမ်းအေးမှုကိုလည်းမုန်းတယ် ။
၈ ။ ကဗျာရေးမရနိုင်တဲ့ ရှပ်ထွေးပွေလီတဲ့ မပီမသ ညတွေကိုလည်းမုန်းတယ် ။
၉ ။ အသည်းကွဲသမားယောင်ဆောင်ပြီး အွန်လိုင်းမှာ ကြူတတ်တဲ့ သကောင့်သမီး ၊ သကောင့်သား တွေကို လည်း မုန်းတယ် ။
၁၀ ။ နောက်ဆုံး.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမုန်းတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 9:41 AM4comments:
Sichuan စီရင်စုမှ Chengdu မှာ အသက်၁၈ နှစ်အရွယ်ကောလိပ်ကျောင်းသူလေးဟာ နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့က သူမရဲ့ အတန်းဖော်၂ ဦးရဲ့ကယ်ဆယ်မှုကြောင့်ဆေးရုံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ကျောင်းသူလေးဟာ နားနေ ခန်းထဲ မှာ လှို့ဝှက်စွာ ကလေးမီးဖွားခဲ့ပြီး ရာဇ၀တ်မှုအနေနဲ့ကလေးငယ်ကို လက်ဆွဲအိတ်ထထည့်ပြီး ဖုံးကွယ်ဖို့ ကြံ စည်ခဲ့ပါတယ် ။
နေ့လည် ၁ နာရီလောက်မှာ Sichuan စီရင်စုဆေးရုံကိုအရေးပေါ်အနေနဲ့Taxi တစ်စီးရောက်လာပြီး အဲဒီထဲက နေ သွေးတွေစွန်းနေတဲ့အ၀တ်အစားနဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့အဖော်မိန်းကလေး ၂ ဦးတို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ် ။
ကျန်းမာရေးလုပ်သားဆရာဝန်တွေက သွေးတွေဆင်းနေတဲ့သူမကို ထမ်းစင်ပေါ်တင်ပြီးကူညီဖို့လုပ်တဲ့အခါ မိန်းက လေး တစ်ဦးကထပြီးအော်ခဲ့ပါတယ် ။
" ကားထဲမှာ ကလေးတစ်ယောက်ရှိသေးတယ် !!! "
ဆရာဝန်တွေက လက်ဆွဲအိတ်ကိုဖွင့်ပြီးကြည့်တဲ့အခါ မိန်းကလေငယ်လေးတစ်ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အရေး ပေါ်ကုသ မှုတွေပေးပြီးနောက် ဆရာဝန်တွေက ချက်ကြိုးကိုဖယ်ရှားပြီး ကလေးငယ်ကိုနွေးနွေးထွေးထွေး အ၀တ်နဲ့ ပတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါ ကလေးငယ်က စတင်ပြီးငိုသံထွက်လာပါတော့တယ် ။
" ကလေးကိုဘာလို့ လက်ဆွဲအိတ်ထဲထည့်ထားရတာလဲ "
" ဒါဟာ လူသားမဆန်ဘူးလေ သူမမွန်း ကြပ်ပြီးသေသွားနိုင်တယ် "
ဒီလိုနဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသူကို သေချာမေးမြန်းတဲ့အခါ တစ်ယောက်က ပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့ဟာ ကော လိပ်ကျောင်းသူတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီလောက်မှာ ကျောင်းသူ Xiaowei ဟာ သူမတို့ နားနေ ဆောင်ကို ဗိုက်အောင့်တယ်ဆိုပြီးပြန်သွားခဲ့ကြောင်းပြောဆိုပါတယ် ။
မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးတဲ့အခါ အခန်းဖော်တွေက ကလေးငိုသံကြားခဲ့ရကြောင်းဆိုပါတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ အတန်း ဖော်တွေ နားနေဆောင်ထဲ ၀င်ကြည့်တဲ့အခါ သူတို့ဟာ ကလေးမီးဖွားပြီးဖြစ်တဲ့ Xiaowei ကိုတွေ့ခဲ့ ရ ကြောင်း ၊ အလွန်အ မင်းထိတ်လန့် တုန်လှုပ်မိပြီး ဒီလိုကလေးငယ်လေးကို လက်ဆွဲအိတ်ထဲတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ကြောက်ရွံ့ခဲ့ကြကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။
ကျောင်းက ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Liu Ming ကတော့ ကောလိပ်ကျောင်းသူတွေရော အခန်းဖော်တွေရောက အရင် က ကျောင်းသူသစ်ဖြစ်တဲ့ Xiaowei ဟာ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ မသိရှိခဲ့ရကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။
စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါ ကလေးငယ်ဟာ အပြည့်အစုံကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိတယ်လို့ ဆရာဝန် တွေက တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ် ။
" ကလေးရဲ့ အနေအထားကတည်ငြိမ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီလို မသန့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာ မွေးဖွားခြင်းဟာ တခါတ ရံမှာ ကလေးငယ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ် " လို့လည်းပြောခဲ့ကြပါတယ် ။
" ကောလိပ်ကနေပြီး Xiaowei ရဲ့မိဘတွေကိုအကြောင်းကြားပြီးပါပြီ ပြီးတော့ ပြန်လာ ခေါ်ဖို့လည်း အကြောင်းကြားထားပါတယ် " လို့ Liu က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။ ကောလိပ်ကတော့ ကျောင်း သူရဲ့နာမည် ကိုဖွင့်ဟပြောဆိုဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ် ။
(Source: Global Times/Chengdu Evening News)
Posted by သက်တန့်ချို at 9:28 AM5comments:
လူကိုယ်တိုင်မြက်ရိတ်ရမှာပျင်းလို့ ဒီလိုချီထားလိုက်ရင်ပြီးရော ...။
အော်...ငပျင်းရယ် ခွေးကိုချီပြီးဆွဲခိုင်းရတယ်လို့ အတော်ပင်ပန်းနေဦးမယ် ။
ဒီလိုလေးပဲ ပေါက်လိုက်တော့မယ် မတ်တပ်ရပ်ရမှာပျင်းလို့ ဟိဟိ ။
အော်..ဒီတောင်းစားတဲ့လူကလည်းသူ့ကိုယ်သူ ကိုယ်ပျောက်လူသားပါဆိုပြီး အလှူငွေခံနေသေးတယ် ပျင်းလို့မ ထိုင်နိုင်ရင် မထိုင်နိုင်ဘူးမပြောဘူး အတော်ဥာဏ်ပြေးတဲ့သူ ။
လမ်းရှင်းရမှာပျင်းလို့ ဒီလို ဆိုင်းဘုတ်လေးကိုင်ထားလိုက်ယုံပဲ ။
ဒီလိုငြှိမ်းနေလို့ကတော့ငြိမ်းဦးမယ် မီးတွေက ။
ဆေးသုတ်သမားပျင်းချက်ကတော့ကွာ ကြွက်သေနဲ့ နောက်ချေးပုံတွေမှာပါ ဆေးဖျန်းသွားတယ် ။နည်းနည်း ဖယ် လိုက်ရင် ဘာဖြစ်မှာမို့တုန်း ။ ပျင်းချက်ကတော့ ။
Posted by သက်တန့်ချို at 9:51 AM 11 comments:
လန်ဒန်ပန်းခြံမှ နှစ်စဉ် ဆန်တာကလော့အပြေးသမားများ
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှာ Battersea ပန်းခြံအတွင်းမှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်မြဲဖြစ်တဲ့ ဆန်တာ ကလော့ပွဲ တော်မှာ အပြေးသမားတစ်ဦးက ဆန်တာကလော့ ဦးထုပ်ကိုဆောင်းပြီး ပါဝင်ဆင်နွှဲနေပုံဖြစ်ပါတယ် ။ မသန်စွမ်း သူများ အသင်းအဖွဲ့ကို အထောက်အပံ့ပေးဖို့အတွက် ၆ ကီလိုမီတာကွာဝေးတဲ့ အပြေးပွဲတော်ကို နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 9:43 AM No comments:
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှာ တရုတ်ပြည်အရှေ့ပိုင်း Zhejiang စီရင်စုမှာ Hangzhou မြို့မှာ ခွေးအ လှပြပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ် ။ ခွေးဝါသနာရှင် ခွေးချစ်သူတစ်ဦးက သူ့ရဲ့အချစ်တော်ခွေးနဲ့အတူ လမ်းလျှောက် ပြနေပုံ ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 9:31 AM No comments:
၉၉.၉၉% ရွှေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ နှင်းဆီပွင့် ၁၉၉၉ ပွင့်
Jiangsu စီရင်စု Nanjing မှ ရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ရွှေသား ၉၉.၉၉%နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ နှင်းဆီပွင့် ၁၉၉၉ပွင့်ကို စီထား တဲ့ အသဲပုံသဏ္ဍာန်အခင်းအကျင်းကို ၀ယ်သူတစ်ဦးကကြည့်ရှုနေပုံဖြစ်ပါတယ် ။ နှင်းဆီတစ်ပွင့်ကို 299 RMB yuan ( ၄၅ ဒေါ်လာ) ကျပါတယ်တဲ့ ။
Posted by သက်တန့်ချို at 9:29 AM2comments:
Origami လို့ခေါ်တဲ့ စက္ကူခေါက်ပညာဟာ သင်္ချာနဲ့ရူပဗေဒသဘောတရားတွေပါဝင်နေပါတယ် ။ တရုတ်ပြည် အရှေ့ပိုင်း Zhejiang စီရင်စုမှာ Hangzhou မှ ကုန်စည်ပြပွဲတစ်ခုမှာ စက္ကူခေါက်ပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာ လှပသေသပ်ချစ်စဖွယ်အရုပ်လေးတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ် ။ စနေနေ့တုန်းက စက္ကူခေါက် ပညာရှင်အ ယောက် ၂၀ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အရုပ်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်ကိုပြသခဲ့ပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 9:27 AM 1 comment:
ဘုရားစူး အထူးတဲ့ဗျာ ....